The 12 Brand Archetypes: Kedu onye ị bụ? | Martech Zone
Anyị niile chọrọ ndị na-eso ụzọ. Anyị na-achọkarị atụmatụ ahịa anwansi ahụ nke ga-ejikọ anyị na ndị na-ege anyị ntị ma mee ka ngwaahịa anyị bụrụ akụkụ nke ndụ ha. Ihe anyị anaghị amatakarị bụ na njikọ bụ mmekọrịta. Ọ bụrụ n’ịchọpụtaghị onye ị bụ, ọdịghị onye ga-enwe mmasị n’ebe ị nọ. Ọ dị oke egwu na ị ghọtara onye akara gị bụ, yana otu ị kwesịrị isi bido mmekọrịta gị na ndị ahịa gị.
E nwere aha njirimara iri na abụọ — ma ọ bụ archetypes- ika nwere ike iche. N'okpuru ebe a, agbajisịrị m ihe niile 12 iji nyere gị aka ịghọta ebe ị nọ:
MAGICIAN na-eme ka nrọ mezuo - Ihe anwansi anwansi anwansi banyere ọhụụ. Brandsdị dibịa anwansi anaghị ewu ụlọ ị ga-asa ma ọ bụ nyere gị aka idobe ụlọ gị ọcha; ha na-eme ka gị wildest nrọ ndụ. Ihe ha na-enye bu ihe omuma magburu onweghi onye ozo. Onye anwansi dikwara na ntoala nke uwa nke na ha puru ime ihe na-agaghi ekwe omume. Disney bụ onye anwansi zuru oke. Disney bu ulo oru mgbasa ozi, ma ha adighi ka ndi ozo. Ha na-enye ahụmahụ mgbanwe. Ha nọ n'ụdị nke ha n'ihi ịdị ukwuu nke ọhụụ ha. Cheedị ụdị ika ọzọ nwere ike iwulite Alaeze Ime Anwansi ma ọ bụ a Disney World.
SAGE a na - acho eziokwu - Nye onye maara ihe, amamihe bụ isi ihe na-aga nke ọma. Ihe ọ bụla ọzọ bụ ihe nke abụọ na ịchụso ihe ọmụma. Akara sage nwere ike ọ gaghị enwe mmetụta na-ekpo ọkụ ma na-ekpo ọkụ. Ha anaghị enrapture gị na a kediegwu ụwa dị ka Disney. Kama, onye maara ihe na-enye gị iwu ka ị kwanyere ya ùgwù site n’igosipụta amamihe ha. Mahadum Harvard bụ onye maara ihe. Ha bụ otu n'ime mahadum kachasị asọpụrụ n'ụwa. Na-etu ọnụ na ndepụta ndị gụsịrị akwụkwọ gụnyere ndị isi ala US asatọ, ndị ntolite Nobel 21, na Mark Zuckerberg (ụdị), akara Harvard bụ ihe kacha mara ihe.
INNOCENT chọrọ naanị inwe obi ụtọ - Onye aka ya dị ọcha bụ paradaịs. Onye ọ bụla nwere onwe ya, na-eme omume ọma, ma nwee obi ụtọ na ụwa nke aka ya dị ọcha. Branddị na-emeghị ihe ọjọọ ga-emejọ gị na mgbasa ozi ma ọ bụ gaa n'elu iji kwenye gị. Kama nke ahụ, akara aka gị dị ọcha ga-eme ka ihe dị ike karịa: Orville Redenbacher bụ ihe omimi na-adịghị ọcha. Ha na-erere gi umuaka, popcorn, na mascot ha bu nna ochie nke na-akwusighi inwe obi uto kemgbe isi uzo bu ihe di iche.
OUTLAW chọrọ mgbanwe - Ndị omekome anaghị atụ egwu. Ndị akara iwu na-achịkwa ndụ ha n'eleghị ọnọdụ dị ugbu a anya. Ebe archetype na-emeghị ihe ọjọọ metụrụ akụkụ gị nke hụrụ oge nri n'anya na ụlọ akwụkwọ ọta akara, archetype na-emebi iwu na-arịọ n'akụkụ nke gị ịbe klaasị na ụlọ akwụkwọ sekọndrị. Iwulite otu nzuzo nke na-eso Apple bụ ebumnuche kasịnụ nke ika iwu. Cheta mkpọsa iPod ndị ochie ebe ndị monochrome nwere oge kacha mma na ndụ ha ịgba egwu? Mgbasa ozi ahụ anaghị agwa gị ka ị nọrọ n’etiti igwe mmadụ ma ọ bụ gaa ebe nkiri. Ọ na - agwa gị ka ị nọrọ onwe gị, ịgba egwu mgbe ọ bụla masịrị gị, yana ya na Apple. Ọ bụrụ na ịchọrọ na Apple enweghị usoro ofufe na-eso, tụlee nke a. Ndi mmadu chere n’ahịrị ruo ọtụtụ awa mgbe agbapụtara Galaxy S7? Mba, azịza ya.
JESTER bi n'oge ahụ - The Jester bụ ihe niile banyere ikpori ndụ. Terdị Jester nwere ike ọ gaghị agwọ ọrịa, mana ha na-eme ka ụbọchị gị ka mma. Orchị ọchị, nzuzu, na enweghị isi bụcha ngwa ọrụ jester. Ihe mgbaru ọsọ nke a jester brand bụ ime ka ị mụmụọ ọnụ ọchị na-enye obi ụtọ. The Old Spice Man bụ otu n'ime oge mgbasa ozi mgbasa ozi kachasị amasị m na ihe atụ zuru oke nke jester archetype. Guysfọdụ ụmụ nwoke na-emeghachi omume nke ọma na ịme ụmụ nwoke ihe. Guysmụ nwoke ndị ọzọ adịghị. Site na ịkwa emo site na ụdị aha nwoke a, Old Spice na-arịọ arịrịọ n'akụkụ abụọ.
OVHERNANYA chọrọ ime ka ị bụrụ nke ha - Mmasị, obi ụtọ, na agụụ mmekọahụ bụ isiokwu onye hụrụ ya n'anya. A hụrụ n'anya n'anya chọrọ ka ị na-akpakọrịta ha na oge chiri anya na ndụ gị. Kedu ihe ịzụrụ iji mee ememe? Kedu ihe ị na-azụta ndị ọzọ dị mkpa maka ụbọchị ọmụmụ na ụbọchị ncheta? Ohere inweta bụ, ị na-azụta n'aka onye hụrụ n'anya n'anya. Chee echiche banyere Godiva Chocolate ads. Hà na-eme ka ị na-eche gbasara ahụike gị, ego gị, ma ọ bụ ọdịnihu gị? Mba Godiva rafuo gi. Ọ na-egosipụtakwa na ọ bara ọgaranya na ude mmiri. Ọ na-akpọ gị òkù isonye na oke ihe ụtọ nke ndụ: Chocolate.
Onye na-enyocha chọrọ ịkwụsị - Nnwere onwe bụ ihe niile na-enyocha na-eche banyere. Ebe ụdị ndị ọzọ nwere ike ịnwa inyere gị aka iwulite ụlọ, ụdị ndị na-eme nchọgharị chọrọ ịbata gị n'èzí. N'iburu nke a n'uche, ọ bụ ihe ezi uche dị na ọtụtụ ụdị dị n'èzí bụ ihe dabara adaba maka archetype onye nyocha. Subaru bụ kpochapụwo ụdị ika. Ha anaghị ere ụgbọ ala ha dabere na okomoko ma ọ bụ nkasi obi; ha na-emesi nnwere onwe Subaru na-enye ike. Nsogbu adịghị. Subaru na-enye gị ohere ikpebi ebe ị na-aga, n'agbanyeghị ọnọdụ. Free nweere onwe gị.
Onye na-achị achị chọrọ ike zuru oke - Okomoko na iche bu ihe onye ochichi bu. Akara ndị na-achị achị bụ onye nche ọnụ ụzọ. Ọ bụrụ na ndị ahịa zụta ha, ha ga-abụ nke ndị ọkachamara. Ghọta dị ka ịdị mma ma dị oke ọnụ dị oke mkpa maka akara onye ọchịchị. Ihe ịchọ mma na ụgbọ ala ndị dị elu bụ ihe dabara adaba maka onye ọchịchị archetype. You na-azụta Mercedes Benz n'ihi akara ule ya dara ada? Kedu maka agbara agbara gas ya? Oche ya na-ekpo ọkụ? Mba. Buy zụrụ Mercedes-Benz n'ihi na ị nwere ike imeli ya, imirikiti ndị ọzọ enweghị ike. Mgbe ọ bụla ị kwụsịrị ụgbọala gị, ndị mmadụ ga-aghọta ọnọdụ gị n’emeghị ihe ọ bụla. Nghọta ahụ e ji nwayọ ghọta bụ nke akara onye na-achị na-ere.
Onye ahụ na-elekọta gị chọrọ ịzụlite gị - Onye na-elekọta ya dị obiọma. Ha chọrọ ịnọnyere gị na ndị ị hụrụ n'anya. Brandsdị ndị na-elekọta nlekọta na-ekwu maka ikpo ọkụ na ntụkwasị obi. Nwere ike ịdabere na ha ma a bịa n'ihe gbasara ụmụ gị. Ọ dị obere ịhụ ụdị onye na-elekọta nlekọta na-agba mgbasa ozi na-agba ọsọ na asọmpi ha. Ha na-abụghị nke esemokwu. Ihe ntinye ederede nke Johnson & Johnson bu Johnson & Johnson: Otu Familylọ Ọrụ Ezinụlọ. Gaghị enwe ike itinyekwu ezinụlọ aka karịa nke ahụ. A Johnson & Johnson ad na-elekwasị anya mgbe niile na otu ngwaahịa ha si enyere gị aka ilekọta ụmụ gị. Otú ngwaahịa ha si ewulite ezinụlọ. Nke a bụ achịcha na-butter maka onye na-elekọta archetype.
HERO chọrọ igosipụta onwe ya - Dika dike n’eme ka uwa di nma kari ka nma. Herodị dike anaghị eche banyere ịzụlite gị; ha nwere mmasị ịma gị aka. Ọ bụrụ n’ịchọrọ ịrịgo n’oge ahụ, ị ​​ga-achọ enyemaka onye dimkpa. Ndị agha US bụ ihe atụ kachasị elu nke archetype dike Chee echiche banyere mkpọsa ndị agha na-ahụ ka ndị agha na-agbapụ na helikopta, na-agba ọsọ site na ọzụzụ, na ichebe mba ahụ. Nke ọ bụla yiri nke ahụ ụbọchị gị? Ọ bụghị n'ezie. Ekwesighi ya. Emere ya iji kpalie gị zaa oku a ma bilie n'oge ahụ site na isonyere otu dike: US Army.
GULỌ NTEGR / / nwa agbọghọ na-anọchi anya chọrọ - Enweghị glitz ma ọ bụ nkwado nlegharị anya, ọ bụ naanị ngwaahịa a tụkwasịrị obi nke na-arụ ọrụ ahụ. Nke ahụ bụ ihe ụmụ nwoke na ụmụ nwanyị na-ere mgbe niile na-ere. Ihe ochie a lekwasịrị anya n'inye ihe dị anya site na ịdị mma nke na ọ nwere ike ịrịọ onye ọ bụla. Ọ bụ archetype kachasị sie ike ịpụpụ n'ihi na ị ga-enwerịrị ngwaahịa na-adọrọ adọrọ gafere igwe mmadụ. Onye ọ bụla na-a coffeeụ kọfị. Ọ bụghị mmadụ niile, kama ọ bụ isi mmadụ ọ bụla nwere ike ewepu ụmụ aka. Nke ahụ bụ ihe na-eme ka ndị nchekwa bụrụ ụdị ọhụụ ọ bụla. Ndị nchekwa anaghị ahịa ahịa igwe mmadụ. Ha anaghị etu ọnụ maka ogo ha dị elu, kọfị-niile. Ha na-eme ka ọ dị mfe: “Akụkụ kachasị mma nke iteta n'ụra bụ Folgers na iko gị.” Onye obula teta. Onye ọ bụla na-a Folụ Folgers.
Onye Okike chọrọ izu okè - Onye okike anaghị echegbu onwe ya maka ọnụ ahịa nke imepụta ma ọ bụ ịme ihe n'ọtụtụ. Ha na-eche banyere otu ihe: iwuli ngwaahịa zuru oke. Ọ bụ ezie na onye anwansi ahụ na-emesi ọhụụ na echiche efu ike, ndị okike dị iche iche n'ihi na ha anaghị akpọghe anwansi ụwa ma mepụta ihe na-agaghị ekwe omume. Ha na-emepụta ngwaahịa zuru oke. Lego bụ ezigbo ihe atụ nke onye okike archetype. N'ime otu mgbasa ozi ha, Lego weghachitere n'ụzọ zuru oke ọhụụ kachasị ama n'ụwa. Ha ewupụtaghị saịtị ọhụrụ, ha ekeghịkwa nkà na ụzụ ọhụrụ nke ga-etinye saịtị ahụ n’ụlọ gị. Lego jiri teknụzụ kachasị mfe enwere ike: blọk. Ha weere ịdị mfe a ma kwadoo ya na oke kachasị ya. Nke ahụ bụ ihe ịbụ onye okike pụtara.
Yabụ, kedu ụdị archetype gị?
Site na iri afọ nke ahụmahụ, enwere m ike ịgwa gị ụlọ ọrụ ọ bụla na-abịa na tebụl na-ewere na ha bụ nwa okorobịa / nwa agbọghọ ọ bụla, mana na 99% nke ikpe, ha abụghị. Illingbanye n'ime ihe na-eme ka ika gị bụrụ ihe pụrụ iche na otu ndị ahịa gị kacha mma jikọọ na ngwaahịa gị adịghị mfe, mana ọ bụ ihe kachasị mkpa ị ga - eme iji ghọta ụdị archetype ị kwesịrị iji.
Tags: archetypesbrandnjirimara njirimaraonye nlekọtaokikeDisneyụwa disneyonye nyochadike-emeghị ihe ọjọọOnyebuchin'anyaalaeze anwansionye dibianjedebemgbe nileonye ochichisage